रवि लामिछाने ५ लाख धरौटीमा रिहा, अस्मिता साधारण तारेखमा - Postmandu
रवि लामिछाने ५ लाख धरौटीमा रिहा, अस्मिता साधारण तारेखमा
2019-08-26 2019-08-26 PostmanduLeaveaComment on रवि लामिछाने ५ लाख धरौटीमा रिहा, अस्मिता साधारण तारेखमा
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहनका आरोपी रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत चितवनले ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। पत्रकार युवराज कँडेलसँग ३ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। अस्मिता भनिने रूकु कार्की धरौटीबिनै रिहा गर्न आदेश भएको छ।
रवि र युवराजले कूल ८ लाख रुपैयाँ तत्कालै बुझाएर रिहा भएका छन्।
अदालत समक्ष आरोपीहरुको बयान, तथ्य प्रमाण तथा थुनछेक बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजालसले सोमबार न्युज २४ का सञ्चारकर्मीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो। धरौटी बुझाएसँगै सबै आरोपीहरुले थुनामुक्त भएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन्।
प्रहरीले अदालतबाट दुई पटक गरी १० दिन म्याद लिएर उनीहरुलाई थुनामा राखी घटना अनुसन्धान गरेको थियो।
२०७६ साउन ३० मा काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएका उनीहरुलाई पहिलो पटक ३१ साउनमा अदालत उपस्थित गराइएको थियो।
राजधानीबाट गएका रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायी सुनिल पोखरेल, सुशील पन्त सहितले धरौटीमा छोडी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए। अदालतको एक नम्बर बेञ्चमा भएको सुनुवाईमा न्यायाधीशले दुवै पक्षको बहस सुनेका थिए।
प्रहरीले जुटाएका तथ्य प्रमाण तथा कानुन व्यवसायीको तर्क सुनिसकेपछि न्यायाधीश रावलले आत्महत्या दुरुत्साहनमा पक्राउ परेका लामिछानेसहित २ जनासँग धरौटी तथा रूकुलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएका हुन्।
यसअघि सोमबार र मंगलबार गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा तीनै जना अभियुक्तसँग बयान लिने काम भएको थियो। बयानका क्रममा अदालत समक्ष रविले आफूलाई निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए।
चितवन प्रहरीका अनुसार र पुडासैनीको गर्धनको हड्डी छुट्टिएको र घाँटीसमेत डोरीले कस्सिएको पाइएको पोष्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ। २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यन्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको हो।
रविको बैंक खाता खोजिने, कसरी पठाउँथे मासिक १५ लाख अमेरिका ?
रवि लामिछानेले अब कार्यक्रममा के बोल्न पाउँदैनन् ?
हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै चैत १५ देखि राप्रपाबाट आन्दोलनको घोषणा
2019-03-16 2019-03-17 Postmandu
यस्ता १६ आरोप लागाउँदै राजपाले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
2019-03-06 2019-03-07 Postmandu